साताको ब्लगर: लुना भट्टराइ - MeroReport
साताको ब्लगर: लुना भट्टराइ
फोटोग्राफीमा निकै रुची राख्ने लुना भट्टराइ हाल शिल्पी थिएटरमा फोटोग्राफी गर्दै छिन । डेनमार्कमा फोटोग्राफी अध्ययन गरेकी लुना हाल कलेज फर जर्नालिजम एन्ड मास कम्युनिकेसनमा स्नातक तहमा पहिलो वर्षको प्रथम सेमेस्टरमा अध्ययनरत छिन । श्रीमानको अध्ययनको सिलसिलामा लुना श्रीमानसँगै डेनमार्क गएको आफूले पनि फोटोग्राफी पढेको बताउँछिन । नेपाल फर्केपछि पत्रकारितामा रुची लागेर उनी स्नातक तहमा पत्रकारिता पढ्दै छिन ।
श्रीमानको घर चाहीँ कर्जुना, मोरङ र आफ्नो घर दमक भएको बताउने लुना हाल बालकुमारी कोटेश्वरमा श्रीमानसँग बस्दै आएकी छिन ।
भर्खरै शिल्पी थिएटरबाट मेचीदेखि महाकाली यात्रा गरेर आएकी लुनाले यात्राबाट धेरै अनुभव बटुलेको बताइन । यस यात्राबाट नेपालको खासगरी तराइको वास्तविक जनजीवन बुझ्ने अवसर मिलेको बताउँछिन । फोटो ब्लगिङ गर्ने लुना आफ्नो ब्लग 'ऐना' मा विभिन्न ठाँउको फोटो समावेश गरेको र ब्लग ऐनाले आफ्नो कामको प्रतिबिम्ब गरेको बताउँछिन।
भर्खरै मेचीदेखि महाकाली यात्रा गरेर आउनु भयो । कहिले जानु भयो र कस्तो अनुभव भयो ?
चैत्र १० गते बिहान काठमाडौंबाट हिंड्यौं र बैशाख २ गते आइपुग्यौँ । नेपालको खासगरी तराइको वास्तविक जनजीवन बुझ्ने अवसर मिल्यो । मलाई यस्तो लाग्यो देश परिवर्तनको मोडमा छ । युवाहरु आधुनिक हुदैछन् तर अशिक्षित , उपद्र्याहा र बेरोजगार युवाहरुको ठुलो सन्ख्या मैले तराइमा भेटे जुन एक किसिमले डरलाग्दो स्थिति हो ।
राम्रो-राम्रो फोटो खिच्न पाएँ । बुटवलभन्दा पर कहिले गएको थिइन । पश्चिम नेपाल कस्तो छ भन्ने थाहा थिएन । पश्चिम नेपाल, त्यहाँको जनजीवन देख्न पाएँ ।
भौगोलिक सुन्दरता, बिभिन्न ठाउका बेग्लाबेग्लाई लवाइखुवाइ र परिवेशले मलाई धेरै कुरा सिकायो । शहरका युवाहरुले नेपालको वास्तविक अनुहार बुझ्न आवश्यक छ जस्तो लाग्यो । खासगरी मलाई ती अनुहारहरुले धेरै सिकाए र भावुक बनाए, जो दिनभरी काम गरेर साँझ नाटक हेर्न आउने थकित र अनेकौ समस्या बोकेका अनुहारहरु थिए । धेरै स्थानीय महिलाहरुसँग कुरा गर्ने मौका पाएँ र तिनका दु:खका कुरा सुनें । हामी राजाधनीमा अर्कै भ्रममा बाचेँका रहेछौं ।
फोटोग्राफीतिर कसरी आकर्षित हुनु भयो ?
सानैदेखि निकै रुचि थियो । तर अवसर पाएको थिइनँ । यहाँ हुँदा कलेज जाने, जागिर खानेमात्र ध्यान थियो । उता डेनमार्क गएपछि आफ्नो रुचिको काम गरुँ भन्ने भयो । यहीँबाट सोचेर गएको थिएँ फोटोग्राफी गर्छु भनेर । त्यही भएर फोटोग्राफीको टिचर खोजे र फोटोग्राफी पढ्न थालेँ ।
फोटोग्राफीमा नै करियर बनाउँछु भनेर सोच्न भएको छ ?
मैले फोटोग्राफीमा नै करियर बनाउँछु भनेर पत्रकारिता पढिरहेको छु । यसमा चौथो र पाँचौ सेमेस्टरमा फोटो जर्नालिज्म पढ्नु पर्छ । त्यही भएर नै मैले फेरी ब्याचलर्स देखि पढेको हुँ ।
अब ब्लगिङको कुरा गरौँ । ब्लगिङतिर कसरी आकर्षित हुनु भयो ?
पहिलेदेखि नै ब्लगहरु धेरै पढ्थेँ । आफूले खिचेको फोटोलाई कसरी सबै सामु ल्याउने भन्ने लाग्थ्यो । अब हामी जस्तो भर्खरै सिकेको मान्छेले मिडियाहरुमा अप्रोच गर्न पनि गार्‍हो। ब्लग भयो भने सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्यो । त्यही भएर फोटो राख्न भनेर ब्लग बनाएँ ।
किन ब्लगिङ नै रोज्नु भयो?
धेरै जनाले हेर्नुहुन्छ, कमेन्ट गर्नुहुन्छ । मैले गरेको कामहरुको बारेमा कमेन्ट गर्दा झन उत्साह हुन्छ ।
फोटोग्राफी गर्न थाल्नु भएको कति भयो ?
अढाइ वर्ष जति भयो ।
डेनमार्कमा फोटोग्राफी सिक्दाको अनुभव कस्तो रह्यो ?
जतिबेला मैले क्यामेरा बोकेको थिएँ, त्यतीबेला फोटोग्राफी भनेको के हो र, फोटो खिच्ने त हो नि जस्तो लाग्थ्यो । तर जब क्लास लिन थालेँ टिचरले असाइन्मेण्ट दिँदा मैले थाहा पाएँ राम्रो फोटो खिच्न कति गार्‍हो छ भनेर।
मेरो पहिलो असाइन्मेण्टमा मैले नचिनेको मान्छेको पोर्ट्रेट खिच्नु पर्ने थियो । कसैले पनि फोटो खिचाउन मानेन मैले कतिजना डेनिसलाई राजी गराउन खोजेँ तर उनीहरुले मानेनन । मैले एकजना पनि डेनिसको फोटो खिच्न पाइनँ र कोपेनहेगन घुम्न आएका पर्यटकको फोटो खिचेर लगेँ । डेनमार्कमा फोटोग्राफी पढ्दा मैले धेरै कुरा सिकेँ ।
यहाँ फोटोग्राफीको कस्तो अनुभव भइरहेको छ ?
पोर्ट्रेट त यहाँ पनि गार्‍है छ तर ल्यान्डस्केप चाँही राम्रो छ । (हाँस्दै ) हाम्रो देश नै राम्रो छ नि होईन र ?
तपाईंले ब्लगको नाम 'ऐना' राख्नु भएको रहेछ । किन ?
यस्तो नाम राखौँ जसले मेरो कामको प्रतिबिम्ब गरोस भनेर म र मेरो श्रीमानले धेरै सोच्दा-सोच्दा ऐना राख्यौँ ।
तपाईंको ब्लगको बारेमा केही भनिदिनुस न ।
मेरो पहिलो ब्लग सुर्यास्तको बारेमा थियो जुन मैले कोपेनहेगनको आसपासमा खिचेको थिएँ । एकचोटी बोटिङ गर्न गएका थियौँ । त्यहीबेला मैले समुन्द्रको बीचबाट खिचेको थिएँ र त्यही फोटो ब्लगमा राखेको थिएँ । मलाई सुर्यास्त एकदमै मन पर्छ त्यही भएर म सुर्यास्तको धेरै फोटो खिच्छु ।
त्यसपछि पोर्ट्रेट राखेँ । मलाई मानिसहरुको अनुहारको भाव धेरै मन पर्छ । एउटा फोटो खिच्दा मानिसको धेरै भाव कैद गरिएको हुन्छ ।
अहिलेसम्म के-के पोस्ट गर्नु भएको छ ब्लगमा ?
पहिलो एउटा-दुइटा पोस्ट कोपेनहेगनको छ । पेरिस र जर्मनीको फ्राइबर्ग घुम्न गएको थिएँ त्यहाँको पोस्ट राखेको छु । अरु चाँही नेपालकै राखेको छु । झापा, मोरङ र भर्खरै मेचीदेखि महाकालीको सिरिज भनेर राखेको छु ।
ब्लगिङमा कति समय दिनुहुन्छ ?
त्यो चाँही हेरेर हुन्छ । आफूलाई मन लागेको बेलामा ब्लगिङ गर्छु ।
ब्लगबाट कस्तो प्रतिकिया पाइरहनु भएको छ ?
साथीहरुले राम्रो-राम्रो कमेन्ट गर्नु हुन्छ, राम्रो छ भन्नुहुन्छ हौसला दिनु हुन्छ । यो फोटो मलाई मन पर्‍यो भन्नुहुन्छ यस्तो प्रतिकिया पाउँदा खुशी लाग्छ ।
नेपालमा ब्लगिङको ट्रेन्ड कस्तो छ जस्तो लाग्छ ?
काठमाडौंमा ब्लगिङ गर्ने ट्रेन्ड धेरै छ । काठमाडौंमा ब्लगिङ गर्ने युवाहरु धेरै देखेको छु । काठमाडौंमा बाहिर चाँही मलाई त्यति थाहा छैन । जसरी ब्लगिङ गर्नु हुन्छ लेख्नु हुन्छ एकदम राम्रो लाग्छ । त्यो देख्दा धेरै पढ्नु हुन्छ, लेख्नु हुन्छ जस्तो लाग्छ ।
ब्लगिङ गर्दाको रमाइलो अनुभव ?
मेरो पहिलो ब्लग पोस्ट गर्दा एकदमै उत्साहित भएको थिएँ । मैले ब्लग पोस्ट गरेँ अनि मेरो श्रीमानलाई देखाएँ । मैले त्यसमा थोरै लेखेर फोटोहरु पोस्ट गरेको थिएँ । मलाई त्यतिबेला कसरी ब्लगलाई राम्ररी मिलाएर राख्ने भने पनि थाहा थिएन । अरुको हेरेर त्यही अनुसार बनाइरहेको थिएँ । मैले फेसबुकबाट शेयरगरे र मेरो श्रीमानले पनि फेसबुकबाट शेयर गरिदिनु भएको थियो अनि एकै चोटी दुइ सय पचास जनाले हेर्नु भएको थियो त्यतीबेला म एकदम खुशी भएको थिएँ ।
अब एकैछिन अरु सोसिअल नेट्वर्किङ साइटको कुरा गरौँ । कुन-कुन सोसिअल नेट्वर्किङ साइट प्रयोग गर्नु हुन्छ ?
फेसबुक, ट्वीटर, ब्लग , गुगल प्लस चलाउँछु। गुगल प्लस त्यतिधेरै चलाउदिन । फेसबुक, ट्वीटर एकदमै चलाउँछु । फेसबुक चाहीँ साथीहरुसँग सम्पर्कमा रहनको लागि मात्र चलाउँछु । फेसबुकमा आफ्नो ब्लग शेयर गर्छु र थोरै मात्र आफ्नो कुराहरु शेयर गर्ने गर्छु । ट्विटरमा अरुको ट्वीट धेरै पढ्छु थोरै मात्र आफू लेख्छु ।
सोसिअल नेटवर्किङ साइटको बारेमा तपाईंको धारणा के छ?
सोसिअल नेटवर्किङ साइटको कुरा गर्नु पर्दा यो मानिसहरुलाई खुल्न र मनमा लागेको कुराहरु व्यक्त गर्ने थलो हो । यसले कहाँ के भइरहेछ भनेर बुझ्न मद्दत गरेको छ र अरु धेरै कुरामा यसले सजिलो पारेको छ । आजकाल गाउँ-गाउँमा पनि मोबाइलबाट इन्टर्नेट चलाउन सम्भव भएको छ । यसले गर्दा गाँउ-ठाउँको खबर पनि थाहा हुने भएको छ । एक ठाउँबाट अर्कोमा कनेक्ट हुन पनि सजिलो भएको छ ।
अहिले सोसिअल नेटवर्किङ साइट नभएको भए के हुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईंलाई ?
म यहाँ हुन पाउने थिइन ( हा हा ) । म धेरै समय यसमै बिताउने भएकोले गर्दा धेरै गार्‍हो हुन्थ्यो। केहि थाहा हुँदैनथ्यो कुवाको भागुतो जस्तो हुन्थ्यो होला ।
सोसिअल नेटवर्किङ साइटले तपाईंको व्यक्तिगत जीवनमा केहि प्रभाव पारेको छ ?
आफूलाई धेरै समय दिने र अरुको लागि समय नै नभएको जस्तो हुन्छ । आ-आफ्नो कम्प्युटर लियो, आफू यता श्रीमान उता । अनि आफूमा रमाउने बानी विकास हुने रहेछ सामाजिक सन्जालको धेरै प्रयोग गर्दा । अनि सकारात्मक कुरा गर्दा ट्विटरमा हुने बहस हेर्दा आजकाल के भइरहेको छ , युवाहरुको कस्तो विचार छ के सोच्दा रहेछन भन्ने कुरा थाहा हुन्छ ।
सोसिअल नेटवर्किङ साइटका नकारात्मक पक्ष के-के हुन ?
नकारात्मक कुराहरु गर्नु पर्दा ह्याक गर्ने जस्तो मेरो एक जना दिदिको ६-७ महिना अगाडी अकाउन्ट ह्याक गरेर त्यो फेसबुक अकाउन्ट बन्द गर्नु परेको थियो । अनि अर्कैको फोटो राखेर प्रोफाइल बनाउने जे पायो त्यही लेख्ने । कहिलेकाँही वालमा एकदमै नराम्रो कुराहरु लेखिदिएको, जेल जानु परेको भन्ने सुनिन्छ। कतिजनाको त सम्बन्ध-विच्छेद भएको पनि सुनिन्छ विदेश तिर । ट्विटरमा लक नगर्नु भनिन्छ तर त्यसो गर्दा जसले पनि फलो गरिदिने, स्पाम हुने जस्तो कुराहरु देखेर नराम्रो लाग्छ ।
यस्तो कुराहरुलाई रोक्न के गर्नु पर्छ ?
आफैले प्राइभेसीमा राख्ने । जस्तो मेरो कुरा गर्दा मलाई कसैले मेसेज पठाउन पाउँदैन्, मेरो फोटो हेर्न पाउँदैन , मैले कभर फोटो राख्दा पनि पहिलाको हटाइदिन्छु ।
अब मेरोरिपोर्टको कुरा गरौँ । तपाईंलाई मेरोरिपोर्ट कस्तो लाग्छ ?
राम्रो लाग्छ । नयाँ ब्लगरलाई प्रोत्साहन गर्नु हुन्छ वहाँहरुको अन्तर्वार्ता पढ्दा रमाइलो लाग्छ ।
मेरोरिपोर्टलाई केहि सुझाव दिन चाहनुहुन्छ ?
राम्रो छ । अझै नयाँ प्रतिभाहरुलाई प्राथमिकता दिनु होला ।
तपाईंको ब्लग लिन्क : http://lunaaina.blogspot.com
Comment by Binaya Shekhar on June 29, 2013 at 11:59am
Comment by Pagal Basti on May 6, 2012 at 10:58am
लुना जि बधाइ छ है स्विकार होस
Comment by ramesh khatri on May 4, 2012 at 2:48pm
धेरै राम्रा राम्रा फोटोहरु हेर्न पाइयको छ तपाईको ब्लगमा, अझै धेरै फोटो हरु हेर्न पाईयोस है ..शुभकामना!!!
Comment by एसवी गौतम on May 3, 2012 at 12:45pm
Comment by Aakar Anil on May 3, 2012 at 12:10pm
Comment by Deepak Aryal on May 3, 2012 at 11:34am
Comment by Indra Dhoj Kshetri on May 3, 2012 at 11:31am
लुनाजी ल बधाई छ है ।
Comment by JawKnockRaazaa on May 3, 2012 at 11:09am
Congrats Luna! party!!! Treat toh bantaa hai!! :))
Comment by Ajeeta Sigdel on May 3, 2012 at 10:50am
Comment by Bhumika Ghimire on May 2, 2012 at 8:29pm
luna ji, photo haru ekdum ramra chan. khushi lagyo. wish u success.